बेइजिङमा दश लाखलाई लगाइयो कोरोनाको खोप,भारतमा ३० करोडलाई लगाइदै, नेपालमा कहिले ? – Clickmandu
बेइजिङमा दश लाखलाई लगाइयो कोरोनाको खोप,भारतमा ३० करोडलाई लगाइदै, नेपालमा कहिले ?
क्लिकमान्डु २०७७ पुष २८ गते १२:१३ मा प्रकाशित
एजेन्सी । उत्तरी छिमेकी देश चीनको राजधानी चीनको राजधानी बेइजिङमा मात्रै १० लाख बढीलाई कोरोनाको खोप लगाइएको छ । यस्तै, भारतमा तत्काल नै ३० करोडलाई खोप दिने तयारी गरिएको छ ।
नेपालमा भने खोपका बारेमा हालसम्म कुनै पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको भनिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
चीनमा सवैलाई पहिलो चरणको खोप दिइएको अधिकारीहरुले सोमबार जानकारी दिएका छन् । अहिलेसम्म विकास भएका कोरोनाका खोप हरेक व्यक्तिले दुई चरणमा लगाउनुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
कोरोनाभाइरसको उच्च जोखिममा रहेकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर अहिले उनीहरूलाई मात्रै खोप लगाइएको पनि महानगर स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका उप निर्देशक गोओ जियनले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार पहिलो चरणको खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो चरणको खोप पनि लगाउने तयारी भइरहेको छ ।
उता भारतले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप यही शनिबारदेखि आम सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्न थाल्ने जनाएको छ ।
खोपका लागि ७०० जिल्लामा करिब १ लाख ५० हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले तालिम समेतका आवश्यक जानकारी दिइएको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट १ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । कोरोनाभाइरसका कारण भारत विश्वमै आर्थिक रुपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, र लाखौं मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् ।
हालै भारतका १८ हजार व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणमा झण्डै ६९ प्रतिशतले कोभिड–१९ को खोप लिन आफूहरुलाई हतारो नभएको बताएका थिए ।सेरम इन्स्टिच्यूटले भारतमा आफूले उत्पादन गरेको खोप व्यक्ति र संस्थालाई पनि बेच्ने गरी अनुमति पाएको छ । सेरमको खोप भारतमा भारु १००० तोकिएको छ ।
भारतमा कोरोनाको खोपको मूल्य तोकियो, न्यूनतम २०० देखि अधिकतम २९५ भारुसम्म पर्ने
सन् २०२१ मा विश्वको अर्थतन्त्रः कुन देशले जित्ला, कस्ले हार्ला ?
नाकाबन्दीपछि ३७ वर्षे युवाले सबल बनाएको कतारी अर्थतन्त्र, कसरी भयो चमत्कार ?